किन नआउने भयो युट्युबमा ‘शुभ लभ’ ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
किन नआउने भयो युट्युबमा ‘शुभ लभ’ ?
यही शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘शुभ लभ’ पनि युट्युब रिलिज नहुने भएको छ । युट्युबमा चलचित्र रिलिज हुने आशाले दर्शक हलसम्म नजाने हुँदा चलचित्र युट्यबमा रिलिज नगर्ने निर्णय लिइएको निर्माण टिमले जानकारी दिएको छ ।
ज्योतिषबाट हिरो भएका हरिहर अधिकारीले ‘शुभ लभ’ युट्युबमा नकुर्न दर्शकलाई आग्रह गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘चलचित्र युट्युब रिलिज हुँदैन । यो चलचित्रलाई सन्तोष बाबु लोहनीले निर्देशन गरेका हुन् । उनको यो डेब्यू निर्देशित चलचित्र हो ।
बुद्ध इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रका प्रस्तुतकर्ता प्रदीप कुमार उदय हुन् । चलचित्रमा धर्मराज शर्मा सुवेदीको लगानी रहेको छ । उक्त चलचित्रमा क्रिस्टिन पौडेल, डाक्टर सुर्या थापा, सरोज खनाल, राजाराम पौडेल, राजा राजेन्द्र पोखरेल, रविन्द्र झा, प्रदीप बास्तोललगायतका कलाकारको पनि अभिनय छ ।